Real Madrid Oo Gurigeeda Lagu Garaacay+ SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Real Madrid Oo Gurigeeda Lagu Garaacay+ SAWIRO
Atletico Madrid Ayaa Real Madrid ku dubatay gurigeeda Santiago Bernabeu kadib markii ay 2:1 ugu awood sheegatay. Tiago iyo Arda Turan ayaa jamaahiirt Real Madrid qalbiga ka jabiyay, waana guul daradii labaad ee isku xigta ee ay Atletico Madrid bado kooxda Real Madrid.
Kulankan oo ahaa mid xiiso badan isla markaana ayna labada kooxood waxba iskula hadhin ayay ku soo bandhigeen kubbad qurux badan oo kudhisan weerar iyo weerar celis.
Difaaca kooxda Atletico Madrid ee Tiago ayaa kooxdiisa hoganka u dhiibay daqiiqadii 10 aad ee bilawgii ciyaarta kadib markii uu kubbad madax ah shabaqa Madrid soo taabsiiyay, waxayna kubbadaasi ka soo baxday lugta Koke kaas oo soo tuuray kubbad koorne ah. Ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Atletico Madrid ku hogaaminayso.
Real Madird ayaa si deg deg ah uga jawaabtay goolka looga hor maray waxayna dhawr jeer halis galiyeen goolka uu waardiyahay ka hayay Moya. Laakiin Real Madrid ayaa nasiib u yeelatay in lagu abaal mariyo rekoore kadib markii uu Ronaldo kubbad qurux badan ka farsamaystay difaaca Atletico Madrid ee Siqueira. Ronaldo yaana qaatay rekoorahaa isagoo jihada qaldan u diray goolhaye Moya sidaana wuxuu ku soo celiyay goolkii looga hormaray. Ronaldo ayaa rekoorahaa u dhaliyay Madrid daqiiqadii 26 aad ,ciyaarta ayaa noqotay 1:1.Sidaana waxaa lagu kala nastay qaybtii hore ee ciyaarta.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay koox kastaaba isku dayaysay inay lugna cabsi ugu joogto takalena ay ku dirirto. waxayna labada kooxoodba muujinayeen taxadar aad u badan. sikastaba ha ahaatee, Arda Turan oo ciyaarta badal ku soo galay daqiiqdii 61 aad ayaa Atletico Madrid markale hogaanka u dhiibay.
Waxaana goolkaas shaqadiisa lahaa Jaunfran kaas oo Arda Turan ka caawiyay inuu kooxdiisa goolka u dhaliyo daqiiqadii 76 aad. Ciyaarta ayaana noqotay 2:1 ay Atletico Madrid ku hogaaminayso. Ugu danbayn garsooraha ciyaarta ayaa ku dhawaaqay inay ciyaartu dhamaatay sidaana waxay markale Atletico Madrid ku garaacday kooxda Real Madrid oo gurigeeda marti loogu ahaa. Hore ayay Atletico Madrid uga qaaday koobka Super Cupka Spain kaas oo ay lugtii danbe ee koobkaas 1:o kaga badisay.